Iziphumo zonyulo ezibizwa ngokuthi 'idemokhrasi': Izihlalo zeVVD 33: uMartin Vrijland
Iimiphumo zonyulo ezibizwa ngokuthi 'idemokhrasi': iindawo zeVVD 33
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	16 Matshi 2017	• 15 Comments
AbaMongameli banyulwe, abangakhethiweyo, isitatimende esaziwa nguFranklin D. Roosevelt. Singathi kwakhona: Oorhulumente abakhethiweyo kodwa bakhethwe. Iziphumo zonyulo namhlanje zibonisa ukuba iVVD kaMark Rutte inombolo ephawulekayo Izihlalo ze-33 ziphumelele unayo. Kufuneka ube yingcamango yokuceba ukuba ubone inombolo yamaMasonic, kodwa unokucinga kwakhona ngenombolo ye-Max Verstappen 33. Inombolo ye-33 imela ibanga eliphezulu kwi-Freemasonry. Le nqanaba apho okukhankanywe ngasentla 'ephantsi'isebenza.
Kukho nawuphi na, "abantu" baye bahlala izolo kunye nayo uhlobo olungalunganga lwama populismngokwamagama kaMark Rutte. Eyona nto ibonakala ngokunqoba kweVVD ukutsho kwam ukuba i-populism yephiko elilungileyo liza kuphumelela eYurophu. Kodwa nabani na isuntswana ingqalelo veki yokugqibela, iqaphele ukuba zithutha kunye namagosa Turkish (ukurhoxiswa amalungelo ukugaleleka wezangaphandle nokugxotha uMphathiswa imicimbi yosapho) lwenzelwe ingakumbi kule populist lasekunene-iphiko kuvota kwiVVD. Okubonakala kuphumelele kakhulu. Kwakufana kakhulu nomdlalo owodwa phakathi kweTurkey neNetherlands. UTom Jan Meeus we-NRC uthe ngelanga langaphambili izolo [catshulwa] Het waba bezinye iintlanga: phakathi kweveki ephelileyo bendinjalo The Hague sele wachaza ngokweenkcukacha indlela veki aye: okokuqala wangena hayi umlungiseleli angaphandle kweli lizwe, emva kokufika umlungiseleli Turkish ngemoto - wemeko yonke ayiqhelileyo.
Oku kubaluleke ngathi ukhetho kunye neziphumo zonyulo ziphantsi kokunyanzelisa ziya kuhamba ngaphaya kweso. Lo mkhulu kakhulu ingcamango. Ngaloo mxholo kunomdla ukujonga ngokuthe ngqo kwigama lesiNgesi loRhulumente. Leli gama lithetha ngokoqobo 'ingqondo' (mente) 'control' (gubernare). Ukuqonda ukuba idemokhrasi ihlakulela inkolelo yokuthatha inxaxheba koluntu phantsi kwe 'demos' idinga umoya wokuvusa. Oku kufuna ukuba ubone ngeprogram ukusuka kwindawo yokulala. Ndandiva umbuzo omso izolo: "Uza kuvota ntoni?". Kwandimangalisa ngokukhululeka kokwamkela ingcamango yokusebenza ngokuvota. Yokuduma karhulumente iminyaka umbono ukwakhiwa ukuba 'amazwi ukwenza ngokwenene umsebenzi, Kuyinto yimpumelelo. Ngubani ohlola uorhulumente, olawula ezo zonyulo, ohlola iiphumo? Kunene, loo rhu lumente. Ngubani othi ke kukho into enyanisekileyo ukuba ukukhululwa kwevoti yakho kunenempembelelo? Enye enye "ingcamango engalunganga", ngokuqinisekileyo uya kucinga ngoku. Mhlawumbi mhlawumbi ingxelo kaJohan Cruijff iyinyaniso: "Uyakukubona kuphela xa uyibona". Inkqubo yembono yokuba silawulwa kwi-Hague yinto engafanelekanga. In The Hague baqeqeshiwe onodoli nenjongo 1 kuphela: abantu banoxanduva kuzakulungisa yobukhoboka ngaphandle ukuvukela kwabo. Kungenxa yoko ezopolitiko kufuneka zibe ngabathengisi abahle kakhulu. Bamele bavelise ubukhoboka obandayo njengoko 'buhle kwilizwe'. Umdlalo 'wokutsala iimbombo uze ubenze babhiyozele kancane'. Iindaba ezilungileyo ukuba zihlala zizisa ukuba emva kokuthathwa kweenkululeko, inkululeko encinci iyongezwa. Ngoko umzekelo, uqala ukunyamekela ngononophelo kwaye uxele ukuba i-2 ibhiliyoni iya kuhamba.
Ewe, i-populism yephiko elungileyo aliphumelelanga. Ngaba siyakweqa loo nyathelo? Ingaba ilungile-iphiko ukulwelwa ngoku kwakhona nje inxalenye VVD ukuba i "uhlobo ilungelo ukulwelwa? Kukho nawuphi na, unyulo luye lwalutshintsha kwakhona intsiphelo. Ngaba ngoku siye ngqo kwisigaba sokubhubhisa kweYurophu? Ngaba i-Brexit iyakuthi ngokukhawuleza ihlawulwe ngenxa yokulahlekelwa koqoqosho lwaseYurophu? Ingaba ngokuwa US kuqoqosho phantsi uDonald Trump zanele ukujongana anti-jikelele kunye ubuhlanga kunye ezizenzekelayo? Leyo Yurophu iya kubeka ingxabano ibonakala ngathi ndiyindima. Akukho nto iguquka kuloo ntlonipho. Ngaba ii-Freemasons (i-33e Pharaoh Phrases) mhlawumbi ziguqule i-script kancane? Kamva loo ntlungu uMartin Vrijland yayiya kulungile! Oku akunakuba yinjongo.
Inkqubo yokuba izapolitiko e-Hague zicacise ikusasa lakho liyiyo inkolelo yokuhleleka kakhulu. Jonga ngokukhawuleza imbali ye-EU yaye amandla epiramidi esebenza emhlabeni jikelele, awukwazi ukunceda kodwa ufumanisa ukuba eli likhulu lamandla lisebenza kwimida kunye nezopolitiki kuphela zifeza oko kulandelwe ukusuka phezulu. Ngaloo ndlela bafanele babe ngabathengisi abaphezulu, ngubani, ngokunxulumene neentengiso zeendaba, kufuneka baqinisekise abantu ngokuphindaphindiweyo ukuba 'kubi' kuyimfuneko kwaye 'kulungile'. Ubungqina bolu bukhulu bamandla buboniswe apha kwisayithi iminyaka. Nangona kunjalo, ingxaki kukuba abantu abaninzi bafunda iphephandaba kwimihla ngemihla, bavumile kwirediyo, babukele iTV okanye bafunde iindaba eziqhelekileyo kwi-Facebook's news feed. Kukho abantu bafumana inkqubela yeqiniso eyamkelwe ngaphandle kokuchaswa. Impembelelo ye-hypnosis ixhomeke kakhulu kwingcamango yokuba 'iindaba eziqhelekileyo' ziya kuhlala zineenkalo zenyaniso. Iindaba eziqhelekileyo zithetha inyaniso. Futhi ngenxa yokuba wonke umntu uyayifunda kwaye abaninzi abantu bayayamkela njengeyinyaniso, uya kuba uswelekile ukuba ucinga ukuba uhlukile. Ngaloo ndlela 'iqela licinga' okanye ukwamukelwa kweqela njengoko siyazi ukusuka kwi-fairytale kaKumkani owayengagqoki nayiphi na impahla. UMartin Vrijland yinkwenkwana enqwenela ukuthetha ukuba umbusi akanalo iingubo. Ubumpumputhe obuya kuvela ngexesha le-hypnosis lifaniswa nokungafihlisi okubangelwa yiminyaka yokuxhomekeka kweprogram yeengcamango 'abeendaba bayathetha inyaniso'. Abantu banokubamba ngokugqithiseleyo imidiya ngephutha okanye ukuxoka amanga, kodwa ukuba i-hypnosis impembelelo inzulu kakhulu kwaye inkulu kwaye iquka ukugqitywa kwembali, ininzi yawo iya kude kakhulu.
Khawucinge ukuba uhlala egumbini likaRasti Rostelli kwaye uye wabangela ukuba wonke umntu abe phantsi kwe-hypnosis. Emva koko uhambisa ama-lemons, kodwa uxela phantsi kwe-hypnosis ukuba uyadla imango enomsoco. Ndiyakwazi ukungena kwigumbi ndikuqinisekise ukuba awuyidli imango, kodwa ukuba uhlafuna kwi-lemon. Ndiyakuthi: "Khangela, sisiqhamo esinesikhumba esikhophu, inyama kunye nembewu! Ayikho imango!"Noko ke, logama nje uyangxo- kweminyaka ngomlingo esikolweni lwenkqubo, amajelo eendaba, groupthink kunye nezinye iintlobo lwenkqubo, aninako ukwenza kunye ukuze ubone. Uqinisekile ukuba uyadla imango. Emva kwakho konke, uyayifumana ngale ndlela. Yiyo indlela ekujonga ngayo into enyanisekileyo. Iingqungquthela ezinkulu ziye zazilungisa kwaye zilawulwa ngumfanekiso wakho wenyaniso. Baye baqhawula ingqondo yakho ecacileyo. Ixesha lokuvuka kwaye uqale ukubona oko kwenzeka ngokwenene. Funda ezinye iindinyana zokuvusa kule sayithi ukuba uyazibona!
Uludwe lwekhonkco lovimba: volkskrant.nl, telegraaf.nl, nrc.nl
UMphathiswa wezeMicimbi yaseTurkey yangaphandle: iYurophu kungekudala indawo 'yemfazwe engcwele'
tags: 33, eziziimbalasane, enkulu, PVV, populism, uhlobo olungalunganga lwama populism, ukhetho, iziphumo zonyulo, VVD, zihlalo
16 Matshi 2017 kwi-12: 27
16 Matshi 2017 kwi-15: 20
Yinto kakhulu kunokuba ndandicinga 81% enithe phakathi yokuvota-Njengeenkomo 1-2tje ngokuqinisekileyo edlala Erdogan nabo VVD, Wilders yayidlala indima yakhe anti-ithisisi ukuze ukuhleleka kwakhona kakhulu. I-Rutte ne-Wilders ezimbini zathetha omnye nomnye ngokukhawuleza njengokuba isomiso sibaleka ukukhusela, ixesha elifanelekileyo lokulungelelanisa izinto kwaye ukhethe iingxoxo.
Kwaye ibali lephepha lokuvota mhlawumbi liyamangalisa:
kude nokukhwabanisa kubonakala kunqabile, ukuba kukho kakade kubhaliwe ivoti kwiofisi yokuvota ????
Ngenkqubela yokuba i-ANP ibandakanyeke kwibala?
Oomasipala babiza inani elipheleleyo lamavoti omasipala wabo kwi-ANP. Ngokusekelwe kwezi totali zevoti, i-NOS iya kubonisa iziphumo zokuqala ngokuhlwa kwamhla wokhetho. "
In 2003 wazuza NPM Capital, inkampani mali yeshishini usapho SHV, i ekhulwini 70 umdla-arhente ziquka umvakalisi ndaba PCM Uitgevers, Telegraaf Media Group kunye Wegener. Wemali wathengisa 2004 15 ekhulwini yayo emva kutyalomali ngu Halder, umncedisi we-i-Regional Investment Company for eFlanders (GIMV). NPM wawongwa ulawulo ANP an ekhulwini 10 umdla.
Kwi-2007, abapapasho bephephandaba laseDatshi bashiya i-ANP baza bathengisa umdla wabo ohlala kwi-30 ipesenti kwi-NPM, i-Halder kunye ne-arhente yeendaba. Ngenxa yoko, iimfuno ze-NPM kunye ne-Halder nganye ziza kuma-43,75 ekhulwini. Ulawulo lwe-ANP ke lube lunomdla wepesenti ze-12,5.
Ngamafutshane, amathuba aneleyo okusebenzayo kwaye iimfuno zikhulu
16 Matshi 2017 kwi-15: 27
Omnye u-Bilderberger uya kufumana omnye kwakhona. Ndiya kuqikelela
I-Vice-Prime Minister: iBuma
20 Matshi 2017 kwi-19: 11
IKhabinethi i-Bilderberg III: ????
Inkokeli yeVVD uMark Rutte inokhetho kwikhabhinethi apho ubuncinane iVVD, i-CDA kunye ne-D66.
Uthe ngoMsombuluko kusasa emva kwengxoxo kunye nomhloli oyi-Edith Schippers othi "ngenxa yeziphumo zonyulo" le mibutho emithathu kufuneka ithathe uxanduva loburhulumente. "Kodwa oko kuxhomekeke kwinto abafuna ngayo", wongezelela.
Inhlanganisela yeVVD, i-CDA ne-D66 ayinayo ininzi. Oku kufuna inkampani yesine. I-GroenLinks kunye no-ChristenUnie babonakala bebaviwa abaphambili.
U-Alexander Pechtold (D66) ukhetha iGroenLinks njengowesine iqela kunye neVVD, i-CDA kunye ne-D66. "Iqela eliphambili kunye nabanqobileyo lonyulo", watsho emva kwengxoxo yakhe nomhloli.
URutte naye ufuna ininzi kwikhabhinethi. Kwiminyaka emine edlulileyo uye wafumana oko kufana nokulawula ngaphandle kwesininzi kwi-Senate. I-VVD kunye ne-PvdA kwafuneka ifune inkxaso ngenkxaso yexesha nenkcaso.
UBuma uthe ekupheleni kwengxoxo yakhe kunye namaSchippers ukuba ukhetho lukaKlaver lubonakala lu "lukholwano olukhulu" kuye. Ucinga ukuba le nyathelo kufuneka lilele kunye neqela elikhulu kwaye yiVVD.
Ngamanye amazwi, imithetho yokunyanzelisa abantu iqhutywe kwiSenethi ngokukhawuleza.
20 Matshi 2017 kwi-19: 56
Ngoko sele sele sinomhla, i-Schippers ingaba ndihambe ngomkhumbi?
19 Matshi 2017 kwi-06: 59
Kukho iingxelo malunga nobuqhetseba wokhetho: http://liefdevoorholland.com/verkiezingsfraude/
19 Matshi 2017 kwi-15: 31
@Diewer, mbulela. Ukhetho oluvela kumazwana: ????
17 Matshi 2017 kwi-01: 58
Kwaye umyalezo ukusuka Sneek: Erik Jellema ndandisenza nam ofisi yokuvota indawo sneek phantsi 23: 00 ... iivoti bathathwa basiwa kude kodwa ephakathi ..
Nangona kunjalo, kwi-23: i-45 iziphumo zomasipala wonke zaziwa kakade kwi-NOS ... (ngumasipala omkhulu eNetherlands)
Kwaye kunye nokubala kwencwadi.
17 Matshi 2017 kwi-20: 48
yenza akukho nengqondo yintoni njani olo olulolona i VVD kwisixeko ngalinye ngexesha ngokweentloko kunye nezimvo ngokupheleleyo indlela ezinye res judicata yaye kutheni kufanele lwethu namanye Dutchmen ngamavoti zokundwendwela ezimbini ngenxa VVD, uThixo PVV kwaye ucinga kufuneka ibe phezulu lonke Netherlands wayeza kuba credible kuphela, kodwa hayi zonke ukuba izinziswe e Brussels kwaye iziphumo kwi 21: 15 al MSN kunye nu.nl kunye VVD top kunokuba ngaphantsi d66 kunye gl
18 Matshi 2017 kwi-16: 07
zonyulo zexesha elidlulileyo ezo ziphumo mazaziwe kuphela emva kweeyure 24.00 olufanelekileyo ngaphezu ngokuqhelekileyo malunga 75 ukuba 80 pesenti kwivoti ukhetho bekusithiwa ngesandla zaza zahanjiswa kuzo zonke iiyure nomxhelo 9 Pinocchio kukuba unyulo iphumelele yi VVD was.Terwijl kunye nathi izikhululo zokuvota kuphela kwi-8.30 yokukhiya Ngubani na ongachazela oku?
17 Matshi 2017 kwi-12: 32
Yaye ukuba ufumana ibhola yevolti kwisitya kunye nazo zonke iivoti ezikhethiweyo ze-PVV, akunakukhanya ukuba lo bubungqina obalulekileyo obufunekayo ukuba bukhuseleke? umququzeleli ochaphazelekayo unayo
Ngokumalunga namanqaku kwipokethi yelahla kufuneka ayeke kwaye kufuneka ahambise kwi-ofisi yeNtloko yePVV, mhlawumbi ukhetho luye lwachithwa
okanye ukhetho olutsha lunokukhishwa njengase-Austria ngaleso sikhathi.
19 Matshi 2017 kwi-15: 39
Kuza kubamba imbongolo, uPinocchio Rutte ????
Notis wabhala wathi:
20 Matshi 2017 kwi-12: 18
33! Kwakhona kudlalwa kakhulu kwiArabic Talk shjows apho i-Freemasonry yangena khona ngoku.
Kwi-NPO I-2 program leyo i-19 Matshi: https://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/19-03-2017/VPWON_1265892
Khangela kwi-25.07 min okanye ukusuka kwi-25.00 ngaphandle kwe !!!
ebizwa ngokuba yi-popular basketball number. Ewe i-Zionazies iindawo zonke kwihlabathi ukuhlamba iikhoboka zazo; Ukukhushulwa kwengqondo kubizwa ngokuba yi-brainwashing kwi-ENG-els yakhe!
http://i68.tinypic.com/2yxgkrm.png (@mod nje faka sicela nceda)
Positive kukuba amalungelo alinganayo njll wakhuthaza ukuba abafazi, kodwa kwangaxeshanye okanye setting up kwamadoda nabafazi phezulu enye, inkululeko, inkululeko ngamnye inkululeko ndanga ndibona oko kuthetha ikhoboka commerce, ikhoboka wenkohliso okulungileyo yaso kodwa yenza konke phantsi kwesiqubulo sokuba yonke into kufuneka [ikwazi]. Kwaye ngoku abantu abakhulayo bayazi ukuba ukukholelwa kukuphela kokufa. Inkululeko! Ngokuqinisekileyo ngokuziphatha kunye nangengqiqo kwaye kungekhona ubuncinane (okokugqibela kodwa ..., kodwa ewe ii-ENGELS) ngenhlonipho kubo bonke ubomi.
20 Matshi 2017 kwi-17: 01
Yho oku amakhulu luyaqhubeka nayo e Arabia, House of Saud na isebe eRothschild, Saddam Hussein wayesaziwa ukuba 33e degree, Bin Laden (CIA / 33e degree), Gadaffi (ixesha eNgilani), Moebarek njl .. uyakwazi ukuyithelekisa kwi Cosa Xhosanostra njenge "scavengers" kuba Vatican kwaye xa ufuna ukufumana ephakamileyo elinegunya kunokuba akuhambise (igazi) imibingelelo ukuba yenziwe.
'Ukungabi nasecaleni' lokuzikhethela:
"Kwi-1735 ilandele ukusekwa kwefestile yesibini, ilandelwa iindawo zokulala, nakwezinye iidolophu.
Ukuxhaswa kwe-Orange-mindedness, iindawo zokulala zavalwa ngokukhawuleza ngamazwe aseHolland. Kwakucatshangwa kungaqhelekanga kunye nokukrokra ukuba amadoda ahlukeneyo kwezopolitiko kunye nobunye bezobufundisi bebumbeneyo. "
polo Nice encinane phofu ngexesha ekuhlaseleni Istanbul into 'The Ancient kunye eyamKelekileyo Scottish lokukhula Freemasonry "Okanye njengoko sithe ku Frisia: uyongena oan moar.
20 Matshi 2017 kwi-17: 18
Uze ungalibali ama-Jesuits (Isis Horus Seth), ukufihla emva kwamagama njengenceba, uthando:
UMbutho awukho kumazwe ahlukeneyo, awakhupha iphondo. ILebhanon, apho i-mission yaqala khona kwi-1830, inikwe amaziko anamandla. IYiputa iza emva koko, ngokwemilinganiselo yamaJesuit namaziko. Siyaqaphela ukuba iYiputa lizwe elinamaqela amaninzi amaKristu, iiCopts, kwaye yileyona manani amakhulu kunazo zonke kuMbutho. Iphulo lokufumana iphondo lethu lifumaneka apho. E-Siriya, sisebenze ekubunjweni kweCawa, kunye nabaselula, ekuhambeni kwengqondo kunye nokuphuhliswa kwamaphandleni. Ukususela kwi-2010, i-JRS iphumelele umsebenzi oqaqambileyo, ikhulelwe ekuqaleni kwababaleki base-Iraq, ngoko ke, ukususela ngo-2011, kubahlali baseSiriya. Kukho ngokwenene ama-Jesuits ayishumi eSiriya, phakathi kwabo kukho umbhishophu, obhekana neemeko ezinzima kwaye zihlala ziyingozi. Silahlekelwe amaJesitesi amabini eSiriya: uFr. UFrans van der Lugt, owayevela eHolland, wabulala uApril 7, 2014 eHoms, noFr. U-Paolo Dall'Oglio, ongumTaliyane, wathunjwa ngoJulayi 29, 2013 eRaqqa nguRhulumente wamaSulumane. Asinayo iindaba ngaye.
EJordan, kukho i-Jesuit yoluntu, engekho kwiphondo lethu, kodwa kwi-US Northeast. I-Turkey iyona yephondo lethu ukususela ngonyaka we-2000. Kukhona amaJesitine amane. Bakha uluntu e-Ankara. I-JRS ilapho. Umsebenzi wokupapashwa kwiingcamango zobuKristu kuxhomekeka kakhulu kwiinkampani zethu. I-Maghreb (i-Algeria kunye neMorocco) yayiyinxalenye yePhondo laseFransi. Ukususela kwi-2013, i-Maghreb ibe yinxalenye yephondo lethu. Kukho amaJesithi ayishumi eAlgeria; eMorocco, elinye i-Jesuit okanye iphondo lethu lihlala kunye namaJesitesi amabini asePhondo laseSpain. Ukususela ngoJuni 30, i-2016, emva kwesigqibo sikaBawo Jikelele, iPalestina / i-Israel nayo iphantsi kweli phondo. Oko kubandakanyeka kuluntu olulodwa, oluhlala eYerusalem, ohlala kuyo iindawo ezincinci eBhetlehem. Iinjesi ezingama-9 zikhona apho iinjongo zayo ziququzelele kwaye ziqala ngeNkcazelo yeBhayibhile eRoma, kwiJerusalem Campus.
20 Matshi 2017 kwi-17: 48
Ndiza kukukhumbuza ukuba u-Erdogan akayena uhlanga lwesiTurk, ungumntu waseGeorgia kunye no-Adzharian matrial.
20 Matshi 2017 kwi-17: 36
Ngoko iTurkey nayo yinqaba yelitye:
I-Chatham House Rule ngumgaqo-siseko olawula ukugcinwa kwemfihlo yolwazi olufunyenweyo ngexesha leentlanganiso. Ulawulo lwavela ngoJuni 1927 kwi-Royal Royal Institute of Affairs, eyaziwa ngokuba yiChatham House. Ukususela ekuhlanjululeni kwi-2002, umthetho usebenza:
Xa intlanganiso, okanye inxenye yayo, igcinwe phantsi Chatham House Rule, abathathi bakhululekile ukuba basebenzise ingcaciso efunyenweyo, kodwa iinkcukacha okanye uqhagamshelwano yesithethi (s), okanye nawuphi na nxaxheba, kungaba tyhilelwe.
20 Matshi 2017 kwi-17: 40
Iqela elikhulu: ????
http://exopolitics.blogs.com/files/the-new-underworld-order-christopher-story.pdf (sibonga kwiAverroes)
20 Aprili 2017 kwi-18: 38
Nabani na okholelwa ukuba le mijelo ayilungile kwiqanda lakhe lePasika:
NgoLwesibini, iingxoxo zafumana uMphathiswa wezeMali uJeren Dijsselbloem. Ngokwe-formator Edith Schippers kuye kwacaca ukuba urhulumente olandelayo unako ukuchitha ngaphantsi kunokuba wacingelwa. Nangona uqoqosho luhamba kakuhle, kukho inani lezithintelo kunye neemeko ezilindelekileyo kwikhabhinethi efunekayo. "Isikhundla sincinci," kusho uSchippers. "Ingxoxo ayiyi kuba lula."
Oko akuthethi ukuba akukho mali eyongezelelweyo, kodwa akukho ncinane yokuchitha. Ubungakanani besikhokelo sohlahlo lwabiwo-mali abaxoxisana nabo, ii-Schippers azifuni ukuthetha.
« Namhlanje lixesha, ukhetho, Vote iingcebiso: musa ukuvota!
UMphathiswa wezeMicimbi yaseTurkey yangaphandle: iYurophu kungekudala indawo 'yemfazwe engcwele' »
Iindwendwe ezipheleleyo: 13.826.428
Chekinah op Isimo samapolisa sibi ngakumbi kunaseJamani yamaNazi esidlula njengengcuka enxibe impahla yegusha kwaye awuyiboni
SandinG op Sele luqalile uhlaselo? I-Psycholance yayisele inikezwe ukukhanya okuluhlaza kwi-2018 esekwe kwimeko ye-Els Borst / Bart van U.
Joyina amanye ama-1.682 ababhalisile